FAQs - ZHONGHUI ANOGADZIRA ANOGADZIRA (JINAN) GROUP CO., LTD
Dynamic Balancing Machines, Yakapfava-Kubereka vs. Yakaomarara-Kutakura
Makina maviri-ekuenzanisa michina, kana akasimba ekuenzanisa michina, anoshandiswa kugadzirisa kusagadzikana uye kusimba kusaenzana. Iwo maviri akajairika mhando dzesimba balancing michina iyo yakagashira yakafararira kugamuchirwa ndeye "yakapfava" kana inochinjika inobereka muchina uye "yakaoma" kana yakaoma yakaoma inobereka muchina. Kunyange paine pasina musiyano pakati pemabheyari anoshandiswa, michina ine mhando dzakasiyana dzekumiswa.
Soft Kupa Kuenzanisa michina
Mushini unotakura-munyoro unowana zita rawo kubva pachikonzero chekuti unotsigira rotor kuti ive yakaenzana pamabhegi akasununguka kufamba munzira imwechete, kazhinji yakatwasuka kana zvakaringana kune iyo rotor axis. Pfungwa iri shure kwesitayera iyi yekuenzanisa ndeyekuti iro rotor rinoita sekunge rakamiswa pakati-kati memhepo nepo mafambiro erotor achiyerwa. Iyo michina dhizaini yemhando nyoro-inotakura muchina yakanyanyisa kuomarara, asi zvemagetsi zvinobatanidzwa zviri nyore kana zvichienzaniswa neyakaomarara-inotakura michina. Dhizaini yemuchina wekutakura-unotakura unobvumidza iyo kuti iiswe chero kupi, sezvo basa rakapfava rinotsigira rinopa kusarudzika kwechisikigo kubva kune chiitiko chiri padyo. Izvi zvakare zvinobvumidza kuti muchina ufambiswe pasina kukanganisa iko kuenzana kwechigadzirwa, kusiyana nemachira akaoma-kutakura.
Iyo resonance yeiyo rotor uye inotakura system inoitika pane imwe hafu kana zvishoma pasi peyepasi yekuenzanisa kumhanya. Kuenzanisa kunoitwa pahuwandu hwepamusoro kupfuura resonance frequency yekumiswa.
Kunze kwekuti muchina wekutakura wakapfava unotakurika, unopa zvakanakira kuve nehunyanzvi hwakanyanya kupfuura michina yakaoma-inotakura pakumhanya kwekuyera; michina yakaoma-inotakura inoyera simba iyo inowanzoda yepamusoro yekumhanyisa mhanyisa. Imwe bhenefiti ndeyekuti edu akapfava-anotakura michina kuyera uye kuratidza iko chaiko kufamba kana kusimuka kweiyo rotor painenge ichitenderera iyo inopa yakavakirwa-mukati nzira yekusimbisa chokwadi chekuti muchina uri kupindura nemazvo uye rotor yakaenzana nenzira kwayo.
Mukana wakakura wemachini anotakura akapfava ndeyekuti iwo anowanzo kuve akasiyana siyana. Ivo vanogona kubata akasiyana siyana e rotor masimbi pane imwe saizi yemuchina. Hapana hwaro hwakakosha hunodikanwa hwekudzivirira uye muchina unogona kufambiswa pasina kuwana re-calibration kubva kune nyanzvi.
Yakapfava-inobereka kuenzanisa michina, kunge yakaoma kutakura michina, inogona kuenzanisa akawanda akatenderedza akatarisana mac rotor. Nekudaro, kuenzanisa kweiyo overhung rotor kunoda kushandiswa kweyakaipa mutoro bata-pasi chinamatira chidimbu.
Mufananidzo uri pamusoro apa unoratidza zvinyoro-nyoro zvinobata muchina. Cherekedza kuti iko kutarisisa kweiyo inotakura system inobvumira iyo pendulum kutenderera ichidzoka neshure neiyo rotor. Iko kusuduruka kwakanyorwa neiyo vibration sensor uye yakazoshandiswa kuverenga iyo isina kuenzana iripo.
Hard Kupa Kuenzanisa michina
Makina akaomarara-akaomarara ane basa rakaomarara rinotsigira uye vanovimba nemagetsi epamusoro kududzira kudedera. Izvi zvinoda hwaro hwakakura, hwakaomarara kwavanofanirwa kumisikidzwa nekusingaperi munzvimbo nemugadziri. Mufungo urikuseri kweiyi balancing system ndeyekuti iyo rotor inomanikidzwa zvizere uye masimba anoiswa neanotenderera pane zvinotsigirwa anoyerwa. Kumashure vibration kubva padyo michina kana chiitiko pane yebasa pasi zvinogona kukanganisa kuenzanisa mhedzisiro. Zvakajairika, michina yakaoma-inotakura inoshandiswa mukugadzira mashandiro ekugadzira uko kunotsvaga kutenderera nguva kunodiwa.
Kubatsira kukuru kumachina akaoma-kutakura ndewekuti vanowanzo kupa kuverenga kwekukurumidza kusaenzana, iyo inobatsira mukumhanyisa mhanyisa kugadzirwa.
Chinhu chinodzikamisa chemashini-akatakura akaomarara ndiyo inodikanwa yekumhanyisa kumhanya kweiyo rotor panguva yekuyedzwa. Nekuti muchina unoyera unbalance simba reiyo inotenderera rotor, iyo rotor inofanirwa kurukwa nekumhanyisa kumhanya kuti ibudise simba rakaringana kuti rionekwe nekusimba kwakamira.
Zvisinei nemuchina wekumesa wakaringana wakashandiswa, kuongororwa kweshamhu kunogona kudikanwa kana kuenzanisa marefu, matete matete, kana mamwe ma rotor anoshanduka. Chikwapuro chiyero cheiyo deformation kana kukotama kweanoshanduka rotor. Kana iwe uchifungidzira kuti ungangoda kuyera chikwapuro, tarisa neyedu tekinoroji rutsigiro uye isu tozoona kuti kana kwete chiratidzo chechikwapuro chakakosha pane chako chikumbiro.
Nemazvo Granite Kufanana, Nemazvo Granite, Epoxy Concrete, Nemazvo Granite Cube, Nemazvo Granite Surface Plate, Precision Granite Square Mutongi,